Solovava · Janoary, 2013 · Global Voices teny Malagasy
Solovava · Janoary, 2013
Avrily 2019 31 Lahatsoratra
Febroary 2019 31 Lahatsoratra
Janoary 2019 57 Lahatsoratra
Tantara mikasika ny Solovava tamin'ny Janoary, 2013
Toro-lalana Amin'ny Fananganana Pejy Facebook Misy Fiantraikany
Hafanam-po24 Janoary 2013
Nalefa voalohany tao amin'ny habaka rahavavy Rising Voices ity lahatsoratra ity. Tsy asa mora ho an'ny fikambanana madinika sy ireo mpikatroka ny miara-mametraka paikady amin'ny pejy Facebook, ary mety hampisavoritaka ny fiseraserana ao anatin'ny pejy fanomezana endriky (configuration) ny Facebook. Navoaka voalohany tamin'ny teny Arabo, vao avy namoaka dikany amin'ny teny anglisy...
Avotsory i Bassel: Mpampiasa Aterineto Tandindonin-doza
Nahafeno 9 volana an-tranomaizina i Bassel Khartabil Safadi, mpamokatra rindrambaiko azo tovozina malalaka sady mpikatroka mafàna fo mpandàla demokrasia. Matahotra ny amin'ny ainy ny namany sy ny fianakaviany noho ny fitsarana azy any aminà fitsarana miaramila.
Venezoela: Nanaovana Bemidina Ny Tranon'ny Mpampiasa Twitter Iray
Amerika Latina13 Janoary 2013
Notafihan'ireo manamboninahitry ny fitsikilovana Venezoelana ny tranon'ilay mpampiasa Twitter, Federico Medina Ravell ny Alahady 6 Janoary, izay araka ny voalaza dia ao ambadik'ilay kaonty @LucioQuincioC. Ahiahiana ho mampiely tsaho momba ny fahasalaman'Atoa Hugo Chávez io mpitoraka bilaogy kiritika io
Fanapaha-Kevitra 10 Vaovao Hiarovana Ny Fampiasana Ny Aterineto Amin'Izao Taona 2013 Izao
Fanarahamaso04 Janoary 2013
Misahana manokana ny fiarovana ny fahalalaham-pitenenana amin'ny aterineto izahay ato amin'ny Global Voices Advocacy (GVA) . Efa namoaka toro-lalana sy fitaovana izahay hahafahan'ireo mpiserasera hikirakira am-pilaminana ny aterineto, hanakana ny sivana sy hifampiaro ao amin'ny aterineto. Noho izany indrindra, vonona hatrany izahay hanohy hiaro ny zo maha-mpiserasera anao amin'ity taona 2013 ity,...
Bahrain: Voafonja Noho Ny Sioka Nataony Ilay Mpikatroka Ny Zon'olombelona
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana02 Janoary 2013
Sayed Yousif Almuhafda no filoha lefitra sy Lehiben'ny Sampa-pitehirizan-kevitra ao amin'ny Foibe misahana ny Zon'olombelona ao Bahrain(BCHR). Mpikambana ao amin'ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona Front Line Defenders sy ny Amnesty International ihany koa izy. Nosamborina izy tamin'ny 17 Desambra satria nitarika hetsika tsy misy herisetra tao an-drenivohitra ary nitatitra momba izany tao amin'ny Twitter. Voampanga...
Ireo pejinay momba an i Solovava